Etu ị ga-esi weghachite azụmaahịa gị n’enweghi okporo ụzọ | Martech Zone
Ọ bụghị ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ihe niile achọpụtala oge ha wepụtara weebụsaịtị ha. N'ụzọ megidere nke ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke obere azụmaahịa enweghị weebụsaịtị, ma ya fọdụzie ụdị onyogho ha chọrọ ịzụlite. Ozi ọma ahụ bụ na ọ bụghị iwu na ị ga-achọpụtarịrị ya ozugbo. Mgbe ị na-amalite, ihe kacha mkpa bụ kpomkwem - ịmalite. Na-enwe oge iji mee mgbanwe na rebrand. Dịka CMO nke Domain.ME, onye na-arụ ọrụ nke onwe .ME ngalaba aha, ana m agba akaebe obere na nnukwu ọrụ mmegharị kwa ụbọchị.
Ihe na-akpata ọrụ ndị a dịgasị iche iche. A na-amanye ụfọdụ ndị ka ha gbanwee aha akara ha na njikọta, ma ọ bụ na ọ nwere ike inwe ihe jikọrọ ya na onyonyo a ugbu a, yana ụfọdụ ụlọ ọrụ chọrọ ịnwale!
N'agbanyeghị ihe kpatara ya, otu ihe doro anya - ịchọrọ ịnọgide na-azụ ahịa gị site na itinye aha ya. Ma olee otu ị ga - esi mee ka ndị ahịa gị na - abịa site n’ọnụ ụzọ ma ị gbanwee akara, aha, agba na ihe ọ bụla ha maara?
Ọ bụ ihe dị mkpa iji mee ka ndị ahịa gị bụrụ akụkụ nke aha gị. Ntinye aka na nzaghachi mgbe niile site n'aka ndị na-ege gị ntị bụ ihe kachasị mkpa maka mgbanwe na-aga nke ọma. Dị ka o kwesịrị, ndị na-akwado gị ga-eguzosi ike n'ihe ga-abụ ndị otu ule maka ụdị ọhụụ gị. Gee ha ntị, mee ntuli aka ma ọ bụrụ na ị kwenyere na ị nwere ike ịnweta ụfọdụ nzaghachi na-arụpụta, ma kwe ka ha bụrụ akụkụ nke azụmaahịa gị n'ezie. Ndị mmadụ nwere ekele maka itinye aka na ya ma ha nwere ike ịkwado ma kwado maka akara gị ma ọ bụrụ na ọ dị ha ka ha enyerela gị aka iwulite ya na mbụ.
Gini banyere ebe nrụọrụ weebụ m?
Idobe okporo ụzọ gị na ọkwa gị tara ahụhụ na usoro ịmegharị na ịgbanwe aha ngalaba gị ga-abụ ihe siri ike. Kwadebe onwe gị maka eziokwu ahụ bụ na ị ga-atụfu ụfọdụ ndị ọbịa (yana ụfọdụ ahịa) n'ihi ọrụ a. Agbanyeghị, nsonaazụ njedebe nwere ike ime ka ọ bụrụ ihe ọ bụla kwesịrị ya ma ntụgharị uche echebara echiche nke ọma nwere ike belata mmebi ahụ. Iwu ise a ga - amalite gị:
Mara okporo ụzọ gị - Ga-achọ nyocha zuru ezu banyere ebe okporo ụzọ gị ugbu a si abịa (ozi a dị mfe ịnweta site na Ngwaọrụ Google Analytics). Lezienụ anya nke ọma na chanel ndị na - akwọ ụgbọ okporo ígwè kachasị elu - ma hụkwa na a gwara ndị na - ege ha ntị banyere rebranding na ngalaba mgbanwe. Wepụta oge iji zụlite usoro ga-elekwasị anya na ọwa ndị a ma gwa ha banyere mgbanwe ahụ ngwa ngwa na nke ọma.
Debe ndị ọbịa n'otu ibe - Heard nụtụla banyere rediregharị 301? Ndị ọbịa a na-enyocha saịtị ndị ọzọ na URL ọzọ karịa nke ha abanyeburu na ihe nchọgharị ha ma ọ bụ pịa site na ndepụta nke nsonaazụ ọchụchọ. Nke a na-enyere aka ijide n'aka na ndị ahịa gị na-amaghị na mbugharị na ngalaba mgbanwe gị na-abanye na saịtị ọhụrụ gị. Mgbe ị na-ewepụta akụkọ backlink ma gosipụta isi mmalite ndị na-akpọ weebụsaịtị gị, ị ga-achọ ijide n'aka na URL ndị ahụ niile na-atụ aka na adreesị weebụ ọhụrụ gị. Nwere ike ịchọ iku onye ọkachamara maka nke a.
Sere plọg - Mgbe ị nyochachara ihe niile ugboro abụọ wee mee ka ndị na-ege gị ntị mara nke ọma banyere mgbanwe ahụ, nzọụkwụ ọzọ bụ ịmalite weebụsaịtị gị ọhụrụ. N'oge a, ị ga-achọ ịnweta akaụntụ Google Analytics gị na Console ọchụchọ gị jikọtara na ngalaba ọhụrụ gị. (Lelee nke Douglas ndenye mgbanwe mgbanwe ebe a!) Ọbụghị naanị nke ahụ, mana ị ga - achọ idobe akara ochie na - egbu oge na mkpado meta na ederede ederede nke akụ ọhụrụ gị ka igwe nyocha wee nwee ike ịkọwapụta ma dezie mgbanwe ahụ nke ọma.
Melite njikọ na ndepụta gị - A ga - emelite usoro ndekọ azụmaahịa niile gosipụtara saịtị gị - ma ọ bụrụ na itinye ego na SEO mpaghara ma nwee ọtụtụ narị njikọ na ndekọ azụmaahịa na ịntanetị niile, ọ ga-ewe oge. Backlinks, dị ka ndị dị na akwụkwọ ndekọ aha azụmahịa, bụ ihe ngosi nke mkpa gị na ọnụnọ gị na weebụ. Gakwuru weebụsaịtị ndị jikọtara gị n'oge gara aga ma gwa ha ka ha gbanwee njikọ ha na URL ọhụrụ gị ka ị nọgide na-eme nke ọma na nsonaazụ ọchụchọ engine.
Kwalite, kwalite, kwalite - Leverage PR, mgbasa ozi ndị ọbịa, ozi email, PPC na ọwa ahịa ahịa dijitalụ gị iji mee ka ndị mmadụ mara na ị nọ ebe ahụ na onyonyo ọhụụ na ngalaba. Ego a nwere ike ọbụna merie gị maka ndu ọhụụ, ọ ga - enyere aka nyocha ọchụchọ iji kọwaa ozi gị ma dezie mgbanwe gị nke ọma. A rebranding project enweghị a marketing campaign is a waste, so count on that investment as well.
Mgbanwe dị mma n'ahịa azụmahịa maka ụlọ ọrụ ọhụrụ na nke guzobere. Mara otu ị ga - esi dịrị ndụ ma nwee ọganihu site na mgbanwe ndị ahụ dị mkpa, yabụ gbalịsie ike iji chee azụmaahịa gị na ọkụ kacha mma.
Tags: ngalaba mgbanwendepụta mgbanwe mgbanwe mgbanwerebrandrebranding
Onye na-ahu maka mmuta banyere mmuta, Natasa Djukanovic bu onye isi ahia na ire ahia Ngalaba.ME, ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke na-arụ ọrụ na ịntanetị ".ME." O jirila ọrụ ya niile rụọ ọrụ nke ụlọ akụ, mgbasa ozi mmekọrịta, onye ndu na teknụzụ, ọ na-anwa mgbe niile ịchọpụta ihe nzuzo dị na ebe atọ dị iche n'otu oge.